အရောင်းအဝယ်သမားများ ၈ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်
FBSပါတနာတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းသလို စိန်ခေါ်မှုတွေလဲရှိပြီး အကျိုးလဲရှိစေပါတယ်!
မှတ်ပုံတင်ခြင်း 2016-08-08 - 2016-09-16
ပြိုင်ပွဲ 2016-08-15 - 2016-09-16
အမျိုးအစား FBSရဲ့ချစ်ပါတနာကြီးများအတွက် ပြိုင်ပွဲ
ငွေသားဆုမဲများ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ဖိုးရှိ အက်ပဲလ်အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းအသစ်များ
အထူးဆု နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ ၃ခုမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာအတွက် အထူးသီးသန့်လက်ဆောင်
ရည်​ရည်​ချက်​ ပန်းတိုင်​ တတ်နိုင်သမျှဖောက်သည်များများရှာဖွေပါ။ FBS တွင်စရံငွေထည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းပါ
သင်၏မိတ်ဆက်ကွန်ရက်ကိုချဲ့ ထွင်ပြီး FBS ၏ အကောင်းဆုံးပါတနာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ!
ပါတနာပြိုင်ပွဲတွင် အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် ၃ဦးကို Retina 4K display 3.1GHz 1 TiBမျက်နှာပြင်အကျယ် 21.5 လက်မရှိသည့် iMac, မျက်နှာပြင်အကျယ် 13 လက်မရှိသည့် MacBook 2.0GHz 256 Gb, နှင့် iPhone7Plus 128Gbတို့ ကို ပထမဆု ဒုတိယဆု တတိယဆုတို့ အဖြစ် အသီးသီးချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ၃ခုမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာကို(iPartnerပြိုင်ပွဲ၊ iPartner 7ပြိုင်ပွဲနှင့် လက်ရှိ iPartner7Plusပြိုင်ပွဲ) ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ FBSရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
စာရင်းပေးသွင်းပြီးနောက်မှာ - ဖောက်သည်အသစ်တွေကို ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်ပါ! ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ သင်ဖိတ်ခေါ်ထားသူများရဲ့ ငွေသွင်းရင်းနှီးမှုများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ lotတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် သင့်အတွက်အမှတ်များရယူပါ.
သင့်အနေနှင့် ပါတနာပြိုင်ပွဲသုံးခုလုံးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်. ယခင် iPartnerပြိုင်ပွဲများတွင်အမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့ပြီး iPartner 7နှင့် လက်ရှိ iPartner7Plusပြိုင်ပွဲတွင် အမှတ်အများဆုံးရရှိမည့် နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်ကင်း ပါတနာကို အံ့အားသင့်ဖွယ် VIPအထူးခရီးစဉ်တစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပါသည်. ယခင်ပြိုင်ပွဲများတွင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပါတနာတစ်ဦးက FBS ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘက်မြို့သို့ အထူးခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆု ရရှိခဲ့ပါသည်.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အပြည့်အစုံကို personal areaတွင် ကြည့်ရူနိုင်ပါတယ်။
ဖောက်သည်သဘောတူညီမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက်များတွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ဆောင်ရာ၌ အတူရှိနေမည့် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအနေအထားများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်လက်ခံပါသည်။
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်ခြင်း၏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်မှုများကို သိရှိထားပြီး ကုမ္ပဏီ၏ IBသဘောတူညီမှု ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုလဲ လက်ခံသဘောတူပါသည်.